संवेदनाको सतही प्रस्तुति (फिल्म समीक्षा : मारुनी) - मनोरञ्जन - नेपाल
संवेदनाको सतही प्रस्तुति (फिल्म समीक्षा : मारुनी)
​​​​​​​फिल्म : मारुनी | रेटिङ : २/५
नेपाली फिल्मको लगानी बढ्यो, संख्या बढ्यो, दर्शकको सिनेमा सारक्षता बढ्यो, संसारभरका सिनेमासँगको पहुँच बढ्यो तर स्वदेशी सिनेमाको गुणस्तर बढ्दै–बढेन । पुरातन कथ्य र संरचनामा अल्झिँदा फिल्ममेकरमा नवीन र कलात्मक दुनियाँमा सयर गराउने शिल्प विकास भएन । सोही कारण सिनेमाको हविगत महँगो र झकिझकाउ पहिरन लगाइएका ‘डमी’भन्दा खास माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थात्, भावशून्य । करिब–करिब यही कोटीमा अटाउने सिनेमा हो, मारुनी । जुन बाहिरबाट आकर्षक नै देखिन्छ तर भित्र भने संवेदित बनाउने ताकत छैन । यसका लेखक/निर्देशक हुन्, नवल नेपाल । मनछुने सिनेमा बनाउन कहलिएका नवलले मारुनीमा पात्रमार्फत दर्शकलाई प्रवाह गरेको संवेदना सतही छ ।भलै केन्द्रीय कथामा रहेको एउटा सस्पेन्सचाहिँ नेपाली दर्शकका लागि रोचक लाग्न सक्छ । लेखनमा उनले गोविन्द फुयाँलसँग सहकार्य गरेका छन् ।
यश (पुष्प खड्का), राज (आयुश प्रधान) र मधु (रेबिका गुरुङ) सँगै कलेज पढ्छन् । यश र राजको मित्रता बाल्यकालदेखिकै हो । धनी बाबुको छोरा भएकाले यशको हरेक समस्या राजले समाधान गरिदिन्छन् । मधुचाहिँ यशलाई मन पराउँछिन् । सामान्य मनमुटाव भएपछि राज एकाएक हराउँछन् । केही वर्ष बित्छ । यशले आफैँ व्यवसाय थाल्छन् । त्यहीबेला कथामा अर्की युवती सुमन (साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह)को प्रवेश हुन्छ । यशको व्यवसायमा जोडिन्छिन् । उनी को हुन्, मधुचाहिँ कता छिन् ? यी सवालवरपर घुमेको छ, फिल्म ।
दुई केटा, एउटी केटी । एकअर्कालाई मन पराउने, सम्बन्धमा दरार आउने । सयौँ सिनेमामा हेरिसकेको छ, मध्यान्तरअघि मारुनी यही परिधिमा खुम्चिएको छ । यसलाई ‘ट्रिटमेन्ट’मार्फत ताजापन दिलाउन सकिने अवसर पनि निर्देशकले उपयोग गरेका छैनन् । पैसा खर्चदैमा, अरुसँग झगडा गर्दैमा सम्बन्धको सामीप्य अनुभत हुन्न । राज र यशको मामलामा त्यस्तै हुन्छ । भावनात्मकभन्दा भौतिक रुपमा नजिक तुल्याउने दृश्य खर्चिएको छ । त्यस्तै, चरित्र र पृष्ठभूमि स्थापित नगरी कथा अगाडि बढाइएकाले उनीहरुको भोगाइ र विछोडले दर्शकलाई पोल्दैन । न त राजको याद नै आइरहन्छ । अनाथ बनाउँदैमा पात्रप्रति प्रेम घनीभूत भइहाल्छ र ?
मध्यान्तरको केही समयपछि पनि घिसिपिटी चलिरहन्छ । यशको व्यावसायिक समस्या, सुमनसँगको भेट, प्रगाढता र त्यसपछिको उन्नति रफ्तारमा हुन्छ, उतिविघ्न पत्यारिलो लाग्दैन । तर सुमनको प्रेमले सीमा नाघ्नथालेपछि रोचकता थपिँदै जान्छ । सुमन र उनका बाबुको सम्बन्धलाई निर्देशकले मार्मिक शैलीमा देखाएका छन् । सुमनसँग जोडिएको रहस्यले स्वदेशी फिल्म मात्र हेर्नेलाई झस्काउँछ । यशको बेचैनी र मधुको व्यवहार चाखलाग्दो हुन्छ । तर ‘ट्वीस्ट’को आयतनअनुरुप त्यसको आवश्यकतालाई अर्थपूर्ण बनाइएको छैन । भलै यो ‘प्लट’ नेपाली फिल्मको हकमा नयाँ नै मान्नुपर्छ ।
सिनेमामा बलियो हुन घरको इँटाझैँ दृश्यको जोडाइ दरिलो हुनुपर्छ तर मारुनीमा दृश्य–दृश्यबीचको सम्बन्ध कसिलो छैन । आउँछ, जान्छ तर दिलमा बस्दैन । मध्यान्तरअघि यश र राजको दोस्ती झल्काउने उस्तै प्रकृतिका दृश्यलाई प्रधानता दिइएको छ । क्लाइमेक्स नजिकिदै जादाँचाहिँ पर्दातिर दर्शकको ध्यान खिचिँदै जान्छ । यसमा मधुको भूमिका प्रभावकारी छ । हल बाहिरिएपछि फिल्म बिर्सिहालिन्न, केही जिज्ञासा बाँकी रहन्छन् । प्रतीकात्मक र एकहदसम्म अपरम्परागत क्लाइमेक्सका लागि नवल प्रशंसनीय छन् । खासमा मारुनीको साख बचाएकै पछिल्लो आधा घन्टाले मात्र हो । ‘सक्दिनँ म बाँच्न तिमीबिना...’ गीतले फिल्मको मर्म बोकेको छ । सञ्जय लामाले दृश्यको भावअनुकूल खिचेका छन् । तर पार्श्वध्वनिचाहिँ धेरै ठाउँमा कर्कश लाग्छ ।
फिल्मको अधिकांशमा दृश्य पुष्प खड्का देखिन्छन् तर उनकै अभिनय बनावटी लाग्छ । न संवाद स्वाभाविक छ, न त भावभंगीमा नै । यही स्तरको अभिनय उनको करिअरका लागि घातक छ । पछिल्ला फिल्ममाझैँ साम्राज्ञीले फेरि निराश बनाएकी छन् । चरित्रलाई आत्मसात् नगरेकाले हुनुपर्छ, पर्दामा उनको उपस्थिति जीवन्त लाग्दैन । सबभन्दा पहिले उनले नेपाली शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नु आवश्यक छ । यसै फिल्मबाट डेब्यु भएकी रेबिका गुरुङले भने केही आशा जगाएकी छन् । भूमिका छोटो भए पनि आयुश प्रधानले सम्झनालायक काम गरेका छन् । त्यस्तै, आवरण भव्य बनाउन निर्माण पक्षले दिल खोलेर खर्च गरेको छ । निर्देशकका रुपमा नवलको साख जोगिने र गर्व गर्ने फिल्म होइन, यो । सर्जकको सोचाइ र त्यसअनुरुप दृश्यबनोटको शिल्पफराकिलो हुनु प्रीतिकर हुन्छ ।
अहिले बनिरहेका नेपाली फिल्ममै चित्त बुझ्ने र बुझाउनेले मारुनी हेर्दा निराश हुनुपर्दैन । थप गुणको अपेक्षा राख्नेचाहिँ झेल्न मुस्किल पर्छ । र, यसले संख्या थप्नुबाहेक नेपाली फिल्मको श्रीवृद्धिका लागि अर्को योगदान गर्दैन पनि ।
प्रकाशित: भाद्र १३, २०७६
ट्याग: फिल्म समीक्षाचलचित्र मारुनीसाम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह पुष्प खड्का
प्रेमको प्रतीक रानीमहल
पढ्नुहोस्, ‘मर्दानी २’ को समीक्षा
पुस १५, २०७६
तारागाउँ म्युजियममा बोल्ने चित्र
पुस ९, २०७६
कुहिरोले पनि छेक्न नसकेको शुक
पुस ६, २०७६
पढ्नुहोस्, ‘पति पत्नी और वो’ को समीक्षा
किम्फको नयाँ संस्करण
पढ्नुहोस्, ‘माछा माछा’ को समीक्षा
विदेशी फेस्टिभलहरूमा वाहवाही लुटिरहेको एउटा सिनेमा, जसको नेपालमा चर्चा छैन
बलिउडमा हिरोइनको मानक भत्काउँदै छिन् भूमी पेड्नेकर
मंसिर १३, २०७६